Creative Writing » သူမ၏ သူမ – ၁	29
ဆရာ- ဘာအလုပ်တွေခေါ်လဲ။ (အမှန်ဆို သူမေးတာမစောင့်ဘဲ သူမကအရင်ဖြေသင့်တာနော်)
HMM says: ဂဒို့လဲ ပထမအိမ်သာဘူးတုန်းက အဲတိုင်းပါပဲကွယ်
အိမ်သာဘူးဝါးမေးသမျှ ဟုတ်ဟင်းနဲ့ပီးသွားဒါပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: အင်တာဗျူးတင်မဟုတ်ဘူး အလုပ်ထဲမှာလို အဲလိုဖြစ်နေတာ..မနည်းပြင်ထားရတာ အဲဒီ ယောင်ဝါးဝါးအကျင့်ကို
kai says: ကိုးထောင်ဆိုတာ.. တရက်လား.. ။ တပါတ်လား.. ။
အတွင်းရေးမှုးနေရာဆို.. တော်တော်စိတ်ချရမယ်ထင်တာပဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: တစ်လလစာပါ သဂျီးရယ်..အဲဒါမို့ အခုချိန်ထိ ညံ့သေးတယ်လို့ပြောတာပါ။
kai says: ညီတော်မောင်ပြောပြောနေတဲ့.. တတ်ပြေးတွေဆိုတာ.. အဲလိုဆြာမတွေနေမှာ..
အလုပ်ကအကုန်ကျခံသင်ပေး..တတ်ရင်..တခြားအလုပ်ကို ပြေးပြေးသွားလို့….တဲ့.. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: တော်ဝင်ပန်းလေးကတော့ ၁၀ နှစ်တောင် လုပ်သက်ရှိပြီဆိုတော့ တတ်ပြေးထဲ မပါတော့ဘူးပေါ့။
Tawwin Pan says: ဟုတ်ပ ကိုကိုခင်ဇော်ရယ်…အဲသဂျီးကတော့ သူများပြောတာတွေကိုနားယောင်နေတာပဲ….သူများတွေလစာ ၁သိန်းလောက်ရနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တွေက အဲဒီအလုပ်မှာ လေးသောင်းပဲရသေးတယ်။ တခါတလေတော့လည်း အဲဒီဘက်မှာ အချိန်တွေအရမ်းပေးခဲ့လို့ ခုလို ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်မိတာပဲ။
Tawwin Pan says: ဘယ်အိုကေမလဲ…..နောက်နေ့တွေမှ စာသင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတင်ပေးမယ်နော်…အားပေးမယ့်သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့…
ဒါနဲ့ ရွာသားအသစ်လေးကို ကောင်းကောင်းနှုတ်ဆက်ထားတယ်မလား……… :P
သင့်အေးရိပ် says: ”တကယ်တမ်း ရေးချင်တာက”ဆိုတာကို တကယ်တန်း ဖတ်ချင်တာ
Tawwin Pan says: အဲဒါရေးဖို့ကို ဒီလိုပို့စ်တွေနဲ့ အစပျိုးနေတာပါရှင့်။ ကိုအောင်မဲလင်းလားလို့..နာမည်ပြောင်းသွားတော့ လူမှားနေမှာစိုးလို့။
သင့်အေးရိပ် says: ကျနော် ရွာသားသစ်ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
ဂျက်စပဲရိုး says: အခု လုပ်နေတဲ့ ဆီမှာ အင်တာဗျူး လာဖြေတာကို ပြန်သတိရ သွားတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: တော်ဝံပန်း
Tawwin Pan says: ဦးကြောင်ကြီး
အောင် မိုးသူ says: ကိုးထောင် ???
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .Computer ဆြာမကတစ်လမှကိုးထောင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: Computer ဆြာမ တစ်လမှ ကိုးထောင်ရပါတယ်ဆိုတာကို မယုံကြဘူးကိုး…………….
Foreign Resident says: ဆရာ – ညည်းဘာလုပ်မှာလဲ
Tawwin Pan says: ဟုတ်ကဲ့။ အဲလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက တကယ်ကိုဘာမှမသိတာပါ။
Foreign Resident says: ” ကျွန်မလည်း အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ – – – –
Tawwin Pan says: အဲဒါဆို ကျွန်မတို့လိုလူမျိုးတွေအတွက် Foreign Resident လိုမျိုး အလုပ်ရှင်တွေများများရှိရင် အလုပ်လုပ်ဖို့ နေရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
Foreign Resident says: ” လေ့ကျင့်ယူလို့ကော မရနိုင်ဘူးလား ”
Tawwin Pan says: ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
sorrow says: သူမရဲ့ဘ၀မှာ အားအကျဆုံးက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ Management ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေနိုင် ကြတဲ့သူတွေပဲ။ .
Tawwin Pan says: တကယ်တမ်းပြောရရင် ကုမ္ပဏီအလုပ်ကို လုပ်တာ အခုမှ ၃နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
kotun winlatt says: ဟေ ဟေး အရင်ကတော့ မောစရာပေါ့ အခုအချိန်ပြန်ရေးပြတော့ ရီစရာ သဘောကျစရာလေးဖြစ်သွားရော တကယ်တမ်းရေးချင်တာကို ဆက်ရေးပါဦးဗျို့
Tawwin Pan says: ဟုတ်ကဲ့။ တစ်ရက်ရက်တော့ ရေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။